DandyLoop: Mizarà mpivarotra an-tserasera anelanelan'ny fivarotana | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 6, 2014 Alatsinainy 8 Febroary 2016 Douglas Karr
Ny fomba fanao mahazatra indrindra amin'ny sehatra an-tserasera maro dia ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa samihafa miasa amin'izany sehatra izany, na lehibe na kely. Mateti-pitranga izany amin'ny fampiharana finday, amin'ny lalao an-tserasera, amin'ny atiny video, ary mazava ho azy ao amin'ny tranokala atiny. Ao amin'ny tranokala atiny no ahitantsika ny tolo-kevitry ny atiny anelanelan'ny tranonkala, na dia mpifaninana aza izy ireo. Sarotra ny mahita mpitantana izay tsy hanohana an'io fanao io. Na izany aza, mila fahamatorana avo lenta avy amin'ireo orinasa any an-tsaha izy ireo - mila takatr'izy ireo fa ny fizarana dia tsy fanomezana tokana, fa mandeha roa - mandresy ny rehetra.
Na eo aza ny fiarahany tamintsika hatramin'ny nanombohan'ny internet, tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nanomboka nanala demokrasia ny tenany ny indostrian'ny eCommerce. Ny fiparitahan'ny fitaovana SaaS dia nahafahana nisokatra fivarotana an-tserasera maro kokoa, ary ankehitriny dia mihoatra ny 12m amin'izy ireo. Ny zavatra iray tsy hita teto dia ny fampiharana ny fiaraha-miasa: ny magazay dia mbola mifatotra amin'ny drafitra marketing mahazatra lafo vidy, ary mitady fomba vaovao izy ireo hanatonana ny mpanjifa mety ho - ny sosialy dia iray, ary avy eo ny atiny. Tsapan'izy ireo izao ny lanjan'ny fiaraha-miasa, nefa tsy manana fomba hanatanterahana izany izy ireo.
Ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fivarotana an-tserasera dia ny asa aman-draharaha ifotony - fivarotana vokatra. Raha vantany vao manapa-kevitra ny hiara-miasa ny mpivarotra roa mifandraika ary mifamporisika amin'ny vokatra avy amin'ny tsirairay, dia mahita CTR izahay izay avo kokoa noho ny zavatra hafa rehetra fantatsika amin'ny marketing nentim-paharazana (maherin'ny 7% eo ho eo). Izany dia satria tsy toy ny be loatra amin'ny varotra nentim-paharazana - eto ny sandan'ny mpivarotra - io no tadiaviny rehefa miantsena izy.
DandyLoop mamela ny fampiharana ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny sehatra iaraha-miasa amin'ny fivarotana an-tserasera, ahafahan'ny magazay tsirairay mahita sy manasa fivarotana hafa hiara-hiasa aminy, midika izany fa hifamporisika izy ireo amin'ny vokatr'izy ireo. Mivadika amin'ny làlana hafa koa io - ny fivarotana tsirairay dia mety ho hita ary asaina hiara-miasa amin'ny hafa. Izy ireo dia afaka mitantana ny hetsika tambajotran'izy ireo ary manara-maso ny fahombiazan'ny mpiara-miasa tsirairay.
Miorina amin'ny fitoviana ny fiaraha-miasa, ary eo no mifehy ny algorithm tompona anay - isaky ny mpitsidika omen'ny magazay ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminy dia hahazo mpitsidika vaovao izy. 1 ho an'ny 1. Tsy manam-paharoa amin'ny tontolon'ny eCommerce ity: ny mpanjifanay dia tsy eo amin'ny sehatry ny fivarotana fifamoivoizana am-bola, eo am-pivarotana vokatra izy ireo - ary izany no omenay - fifamoivoizana bebe kokoa, mpitsidika bebe kokoa, ary varotra maro kokoa.
Beta ho an'ny Shopify mpampiasa, DandyLoop manolotra fifehezana feno an'ireo vokatra natolotrao, tatitra mangarahara ary fanamboarana haingana sy mora!
Tags: dandyloopfampiroboroboana ny ecommerceshopifyfizarana mpitsidika